Ọdịnaya bụ Eze ... Mana naanị otu na-eyi okpueze | Martech Zone
Ọdịnaya bụ Eze… Mana Naanị Otu Na-ebu Okpueze
Tuzdee, Machị 7, 2017 Wenezdee, Machị 8, 2017 Douglas Karr
Nụla ebe a na-ekwu, Ọdịnaya bụ Eze. Ekwetaghị m na nke ahụ gbanwere, ekwetaghịkwa m na ọ ga-eme. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ede banyere ngwaahịa na ọrụ ha, nwetara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ede banyere ha, kesara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ekerịta ha, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na-akwalite ha content ọ bụ ọdịnaya na-eme ka ikike, ikike, na mkpebi mkpebi.
Nsogbu na-abịa mgbe onye ọ bụla nọ n'okwukwe ahụ ha ọdịnaya bụ eze. Ka anyị kwuo eziokwu, ọtụtụ ọdịnaya dị egwu. Ọ na-abụkarị usoro mmepụta, ahịhịa na-enweghị akwụkwọ na-enweghị agwa, akụkọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla iji gosi ọdịiche dị na ya. Ma ọ bụ ọ bụ ire ahịa-ikwu okwu, ihe njiri mara nke ọdịnaya a na-agbadata site na ọkwa ọchịchị na micromanagement.
Ma, n'ezie, okwesighi maka okpueze. Ọdịnaya gị enweghị ike ịbụ eze belụsọ ma ọ bụrụ na ọ pụrụ iche, dị ịrịba ama, ma merie n'ọgụ ahụ. Wantchọrọ ịbụ Eze? (Ma ọ bụ Queen - ọdịnaya enweghị okike). Lee ụfọdụ ndụmọdụ:
Ejiji akụkụ - Eze anaghị eyi uwe onye nkịtị, a na-achọ mma ya n'uju na nkume dị oke ọnụ, ọla dị oke ọnụ na akwa mara mma. Kedu ka ọdịnaya gị si ele?
Nye iwu n'ụlọ ikpe gị - Eze anaghi ari nwayo. Ọ naghị agba izu n'okwu ya, ọ na-ekwupụta ha site na olu ya. Ọ tụkwasịrị obi ma nọrọ onwe ya. Ọ bụ ọdịnaya gị?
Bibie ndị iro gị - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ Eze, ị ga-achị alaeze gị. Compared jiri ọdịnaya gị tụnyere ndị asọmpi gị? Ọ gaghị anọli nso; ọ ga-emerịrị ha nyocha, mgbasa ozi, olu, na mmetụta. Were ndị mkpọrọ.
Na-eburu ndị knight gị - O zughi ịnọdụ ala n’alaeze gị. Ndi kwesiri iyi ndi kwesiri iyi gha acho ọdịnaya gi rue na njedebe nke uwa. Ndị ọrụ na-akwado ndị ọrụ, ndị na-eme ihe ike, na ndị na-ege gị ntị kwesịrị iburu ndị mmadụ ozi gị.
Nye onyinye dị oke egwu - Agbata obi alaeze bụ nanị ole na ole ọlaedo ego pụọ. Atụla egwu imebi eze na alaeze ndị agbata obi ya site na onyinye dị oke mma. N'aka ozo, King Zuck nwere otutu ndi na - ege nti - nye ya ugwo!
Chei, ọ dị mma ịbụ Eze. Ma ị bụ naanị guillotine pụọ na isi gị. Jikere ichebe ala gị ma chịa ụjọ n’etiti ndị iro gị.
Tags: ikikeọdịnaya bụ ezecontent Marketingokpuezemgbe ọ bụlaeze
Kedu ihe bụ Nnukwu data? Kedu uru nke nnukwu data?